Raysul Wasaare Cabdi Weli oo la kulmaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Jabuuti – Mareeg.com: R/wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi balaaran oo uu hogaaminayo oo ka mid ah golaha wasiirada, kuna sugan dalka Jabuuti ayaa lagu wadaa iney maanta kulan la yeeshaan madaxweynaha dalkaas Ismaaciil Cumar Geelle.
Wafdiga uu hoggaaminayo R/wasaare C/weli Sheekh Axmed Maxamed oo gelinkii dambe ee shalay gaaray magaalada Jabuuti ayaa la filayaa in maanta ay la kulmaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
“Aad baan ugu faraxsanahay booqashadan rasmiga ah ee aan ku imid dalka Djibouti ee aan walaalaha nahay, waxyaabo badan ayaan ka wada hadli doonnaa oo ay kamid yihiin xoojinta xiriirka labada dal ee walaalaha aan nahay iyo iskaashiyo kala duwan oo aan wadaagi doonno.” ayuu yiri Ra’iiusl Wasaare Cabdieli Sheekh Axmed.
Ra’iiusl Wasaaraha Djibouti Cabdiqaadir Kaamil oo isna goobta ka hadlay ayaa yiri “Labada maalmood ee soo socota waxyaabo badan ayaan ka wada hadli doonnaa oo ah danaha labada dal ee Walaalaha ah.”
Wasiirka warfaafinta xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mustaf Sheekh Cali Dhuxuloow oo ka mid ah wasiirrada safarka ku wehliya R/wasaaraha ayaa la filayaa inuu la kulmo dhiggiisa dalkaasi, iyagoo ka wadli doona sidii loo sii horumarin lahaa iskaashiga dhinaca warbaahinta ah ee u dhaxeeya labada dal.
Booqashada R/wasaaraha iyo wafdigiisa ay ku joogaan Jabuuti ayaa qeyb ka ah qorshayaasha ay dowladdu ku hagaajineyso xiriirka iskaashi iyo wax wada qabsi oo ay la leedahay wadamada deriska ah.
Raysul Wasaare C/weli Sheekh Axmed oo ay wehlinayaan 5 ka mid ah golaha wasiirrada ayaa horay u booqday dalka Itoobiya oo ay joogeen 3 maalmood.
Muqdisho: Taksiile lagu dilay xaafadda Juungal oo laga qaatay gaarigii uu watay